दिलिपसिंह बिष्टको भिडियो बयान सार्वजनिक, गोविन्द तिवारी जापानबाट फरार (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
दिलिपसिंह बिष्टको भिडियो बयान सार्वजनिक, गोविन्द तिवारी जापानबाट फरार (भिडियो)
काठमाडौं, १८ असोज । न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को २८४ औं एपिसोड हो । आजको यस विशिेष एपिसोडमा पनि विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गएको छ ।
कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा इन्टरपोलले रेड नोटिश जारी गरेका करोडौं ठगेर जापानमा बसिरहेका गोविन्द तिवारीको बारेमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै आजकै एपिसोडमा अदालतबाट निर्दोष सावित भईसकेका दिलिपसिंह विष्ट आफैले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्ने भिडियोको बारेमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. गोविन्द तिवारीका संरक्षक तिलक मल्लले ठगेका व्यक्तिहरु हाम्रो सम्पर्कमा
२. निर्दोष सावित भएका दिलिपसिंहले आफैले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्ने भिडियो भाइरल बन्न थालेपछि…
काठमाडौं । गत साउन १२ गते बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरिएको अवस्थामा भेटिएको कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारा अझैँ पत्ता लागेको छैन । यो बिचमा कञ्चनपुर प्रहरीले दोषी भनी सार्वजनिक गरेका दिलिपसिंह बिष्ट डिएनए नमिलेपछि कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट निर्दोष साबित भएर छुटिसकेका छन् ।
साथै आशंका गरिएका एसपी डिल्लीराज बिष्ट उनका छोरा किरण बिष्ट र आयुश बिष्टको समेत डिएनए म्याच भएको छैन । अहिलेसम्म सरकारले बनाएको उच्च स्तरिय छानबिन समिति, नेपाल प्रहरीले निर्माण गरेको उच्च अधिकारी संग्लन छानबिन समितिबाट केहि पनि बाहिर आउन सकेको छैन ।
तर घटनाको ६४ दिनपछि डिएनए म्याच नहुँदा निर्दोष सावित भएका दिलीप सिहं बिष्टले आँफुले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको स्वीकार गरेको भिडियो सार्वजनि भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल यो भिडियोमा दिलिप सिंह बिष्टले गरेको कुराकानीमा आफुले नै बलात्कार गरेर हत्या गरेको बताएका छन् ।